नयाँ अनुहार – Ranga Pati
हिमानीमा के कमि थियो र सरकार ?
पुर्व युबराज पारस शाहले युटुबर शोनिका रोकायसंगको फोटो आफ्नो प्रोफाइलमा राखेपछि राजपरिवारका शुभ चिन्तकहरु दुखि भएका छन् ! पारस शाहको यस्तो हर्कत देखेपछि उनि माथि प्रश्न गरेका छन् । संकर तिवारी नाम गरेका एक फेसबुक कर्ताले भनेका छन्, ‘हिमानीमा के कमि थियो र सरकार ?’ राजपरिवार प्रति आश्था राख्नेहरुले हिमानी शाहलाई पारश शाहले विभिन्न समयमा […]
के हो एकीकृत जनक्रान्तिको सैन्य कार्यदिशा ?
-उदयबहादुर चलाउने ‘दीपक’ हामीले नेपाली क्रान्तिको सैन्य कार्यदिशालाई ‘ एकीकृत सैन्य रणनीति’ का नाममा संश्लेषण गरेका छौँ । यो रणनीतिलाई हामीले विगत सर्वहारा वर्गले प्रयोग ‘गरेका अल्पकालीन विद्रोह’ र ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ का दुई फरक रणनीतिहरूको एकीकृत स्वरूप बताएका छौँ । दीर्घकालीन जनयुद्ध र अल्पकालीन सशस्त्र विद्रोहलाई सर्वहारा वर्गका फरकफरक सैन्य रणनीतिका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको […]
फेरि आए छापामार !
उनले भने, ‘ शान्तिप्रक्रियापछि नयाँ वर्गको जन्म भयो । तिनलाई सखाप नपारी कसरी गरिबका दिन आउला र ?’ -खोमा तरामु मगर ढुङ्गाले छाएको पुरानो गोठ । गोठको तलामा साँघुरो आँटी । आँटी खचाखच छ र अगाडि झुन्डिएको छ एउटा ह्वाइट बोर्ड । अर्थात् ह्वाइट बोर्डमा लेखिएको छ, ‘माक्र्सवादका तीन सङ्घटक अङ्ग– दर्शन, राजनीतिक अर्थशास्त्र र […]
मुकुन्देको रत्नपार्कको इतिहास !
गृहयुद्द बिसाएर माओबादि शान्तिकालमा आएको थियो । परिवर्तनको मुद्दालाई ब्यबस्थापन गर्नु भन्दा पनि पार्टी र कार्यकर्ताको सेभ ल्याण्डिङ्गका लागि युद्द नायक प्रचण्ड सिंहदरबार संग साँठगांठ र लबिङ्ग गरिरहेका थिए । दलालीहरुको ब्यबस्था भनिने संसदीय ब्यबस्था भित्र प्रचण्डले स्पेस खोज्दै थिए । जुनबेला रत्नपार्कमा एउटा एकल बिद्रोह जन्मियो । त्यसलाई पनि ब्यबस्था बिरुद्दको बिद्रोहको अंशको रुपमा […]
आज -२०७६ मंसिर २७ गते शुक्रबारको राशिफल पढ्नुहोस्।
मेष: चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ,। दुरदराजमा रहेका आफन्तजनसँग सम्बन्ध कायम हुनेछ। रोकिएका काम पुन: सुरु हुन सक्छ। धार्मिक, सामाजिक महत्त्वको क्षेत्रमा भ्रमण हुनसक्छ। मिथुन: का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा,। बोलीवचन एवं प्रवचन भाषण आदिमा प्रशंसा मिल्नेछ। परोपकारी कार्यमा संलग्न भइनेछ। रचनात्मक कार्यमा जुट्दा फाइदा हुने समय […]
Posted on December 13, 2019 Author rangapati Comment(0)
पञ्चायत ढाल्ने त्यो पचास दिन
हरिबहादुर थापा काठमाडौं — शहर दुई दिनदेखि कर्फ्युको सकसमा थियो । पञ्चायत इतर शक्तिका नेताहरु दरबारसँग वार्तारत थिए । कफ्र्यूकैबीच २०४६ चैत २६ को अध्यरात अर्थात् ११:१५ मा रेडियो नेपाल र टेलिभिजनमा राजदरबारको विज्ञप्ति बज्यो । संविधानबाट ‘दलविहीन’ शब्द हटेको, ‘दलमाथिको प्रतिबन्ध’ फुकुवाको घोषणा भयो । राजाको प्रत्यक्ष निर्देशनमा २९ वर्ष ३ महिना ४ दिन […]
Posted on December 12, 2019 December 12, 2019 Author rangapati Comment(0)
जनबादी गायक मोहित श्रेष्ठ र सारदा रसायलीले गाय ‘आँखा लाउन छोड अब कालापानीमा’ (भिडियो)
मङ्सिर २२, काठमान्डौ । नेपाली भूमि कालापानीमा भएको हस्तक्षेप बिरुद्द ‘आँखा लाउन छोड अब कालापानीमा’ नयाँ गीत सार्बजानिक भएको छ । केहि दिन अघि युट्युबमा सार्वजनिक गरिएको गीतमा युवा गायकहरु मोहित श्रेष्ठ, सारदा रसायली र बद्रि चुडालले स्वर दिएका छन् । ‘छल गरेर धोका दिने नालापानीमा… आँखा लाउन छोड अब कालापानीमा’ बोलको गीतको रचना धिरजनाथले […]
Posted on December 8, 2019 Author rangapati Comment(0)
को हुन् यी घुस खाने सिडियो ?
काठमाडौं । घुस लिएको आरोप लागेका दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) खगेन्द्रप्रसाद रिजाल मन्त्रालय तानिएका छन् । अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसूरका अभियुक्तसँग रकम असुली गरेको सार्वजनिक भएपछि रिजाललाई छानविनका लागि तानिएको हो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माका अनुसार उनलाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको छ । उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको प्रवक्ता शर्माले बताए । प्रजिअ रिजालले मेलुङ […]
Posted on December 7, 2019 December 7, 2019 Author rangapati Comment(0)
साम्यवादी कम्युनिष्टहरु श्री ५ कसरि भए ?
कम्युनिस्ट आदर्श र बिचार शिद्दान्त भनेको देश हाम्रो घर जस्तै हो।समाज हाम्रो परिवार जस्तै हो।तर यहाँ हाम्रा कम्युनिस्टहरुले देशलाई प्रयोगशाला बनाए आफ्नो घरलाई मात्रै संपन्न बनाए जनताहरु र समाजलाई परिवार जस्तै संझन अथवा परिवार जस्तै बनाउन सकेनन् ।देशलाई दिनानुदिन लुटिरहेका छन् जनताहरुलाई कंगाल बनाईरहेका छन्। कुनै पनि देशमा सरकार असफल हुनु जनहितमा कामहरु नगर्नु सरकार […]
Posted on December 7, 2019 Author rangapati Comment(0)
हिमानी शाहका पढनै पर्ने उत्प्रेरक भनाईहरु !
समय त समय मै वदलिन्छ, तर मान्छे कहिले वदलिन्छ, केही थाहा हुदैन । त्यसैले भाग्य र समयलाई होइन, स्वयम् आफैमा निर्भर हुन सिकौ । खुशी त यो दिल भित्र छ सिरीफ सन्तुष्ट रहन जान्नुपर्छ । ‘भगवानको भोक नै प्रेम हो’ जती हामी एक अर्कालाई प्रेम, माया, स्नेह, असल व्यवहार गर्छौ त्यती भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ । […]
Posted on December 3, 2019 December 3, 2019 Author rangapati Comment(0)